ktmkhabar.com - यी बार सुरु गर्नुहोस् नयाँ काम , मिल्छ सफलता नै सफलता !
यी बार सुरु गर्नुहोस् नयाँ काम , मिल्छ सफलता नै सफलता !
आईतबारः आइतबारको दिन गीत ,बाद्य वादन, राजसेवा, गाइगोरु, किन बेच गर्ने, हवन गर्ने मन्त्र उपदेश लिने, औषधी निर्माण गर्ने, शास्त्र , सुन, तामा, उनी, बस्त्र जस्ता सामाग्रीको किनबेच गर्ने, रातो वस्तुको कारोबार गर्ने जस्ता कार्य गर्नु धेरै शुभ रहनेछ ।
सोमबारः सोमबारको दिनलाई भगवान शिवको प्रिय दिनको रुपमा लिने गरिन्छ । सोमवार शिवजीको आराधना गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
मंगलबारः मंगलबारको दिन भगवान गणेशको पूजा आरधना गर्ने दिन यो दिन गणेश भगवानका पूजाआज गरे जस्तो सुकै कामको सुरुवात गरेपनि सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
बुधबारः यो दिनलाई पुण्य आर्जन गर्ने दिनको रुपमा लिइन्छ । बुधबारको दिन वस्तु कला, चित्रकला र अध्ययनमा सोचेभन्दा धेरै सफलता मिल्नेछ ।
बिहिबारः यो दिन धार्मीक कार्य गर्नु राम्रो मानिन्छ । यो दिन मन्दिर निर्माण, मन्त्र जप, नवग्रह पुजा गर्दा तपाईको कार्य निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुन्छ ।
शुक्रबारः यस दिन गायण, मणी, रत्न, हिरा, सुगन्ध, बस्त्र, उत्साह, अलंकार, बाणिज्य, व्यापार, गाई वस्तु मिनबेच गर्नु, द्रव्य भण्डारण गर्नु धन सञ्चय गर्नु, कृषि कार्य सुरुवात गर्नु शुभ मानिन्छ ।
शनिबारः शनिबार कुनै पनि नयाँ कार्य सुरु गर्दा शनि देवको ठूलो प्रभाव पर्ने धार्मिक शास्त्रमा उल्लेख गरएको छ । झुटो बोल्नु , ठगि गर्नु , कपट गर्नु , गृह प्रवेश, स्थिर कार्य , नोकरी गर्नु , कलकारखानाको उद्घाटन, फलाम आदिको कार्य गर्नु निकै शुभ मानिन्छ । शनिवार नया कामको थालनि नगर्दै राम्रो मानिन्छ । – एजेन्सीको सहयोगमा